Maxaa looga hadlayaa kulanka u socda Madaxweynayaashii hore? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa looga hadlayaa kulanka u socda Madaxweynayaashii hore?
Kulan doceed hor-dhac u ah, shir ay u dhanyihiin Golaha Midowga Mushariixiinta ayaa hadda ka socda Hoyga uu Sheekh Shariiif Sheekh Axmed, ka degan yahay Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kulan u dhaxeeya Maadaxweynayaashii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo ay wahliyaan xildhibaanno ka tirsan Golaha Aqalka hoose ee Baarlamaanka Fadaraalka, ayaa ka socda hoyga uu MW Shariif ka degan yahay caasimadda.
War ka soo baxay Xisbiga uu hoggaamiyo MW Xasan Sheekh ee UPD, ayaa lagu yiri, “Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo mudane Shariif Sheekh Axmed, oo ay wehliyaan xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo xildhibaan Maxamed Abuukar Islow, ayaa iminka kulan ku leh hoyga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed oo ah guddoomiyaha Golaha Midowga Musharixiinta.”
Kulankaan ayaa looga arrinsanayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka iyo arimaha doorashooyinka oo dhowaan la filayo in laga shiro, Sida lagu xusay war ka soo baxay Xisibiga Midowga Nabadda iyo Horu-marka.
Hayeeshee, sida ay ogaatay Keydmedia Online, shirkaan ayaa hor-dhac u ah, shir loo dhan yahay oo dhawaan la filayo inuu Goluhu yeesho, si loo xalliyo madmadow ka dhashay, waraaq shalay soo baxday oo 12-ka Xubnood Golha ku mideysan aysan isku raacin.
Khilaafka ay waraqdaan abuurtay ayaa banaanka yimid, kadib markii xubno ka tirsan qaar ka mid ah Xisbiyada dalka ka jira ay si dadban uga hor yimaadeen, waxaana la qorsheeyay kulan guud oo ka dhacaya allaadda fogaan aragga, kaas oo lagu dhameynayo wixii dhacay.